Naya course » नदी दोहनको अबैध चक्र नदी दोहनको अबैध चक्र – Naya course
नदी दोहनको अबैध चक्र
कोहलपुर/ नेकपा राप्तीसोनरीका सचिव समेत रहेका व्यवसायी मनोज केसीले राप्तीसोनारी ८ मा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन । सर्वाधिक बढी राजश्व तिरेर अघिल्लो आर्थिक बर्षमा राप्ती नदिको जदिजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का लिएका थिए ।
राज्यलाई कर तिरेर नदि जन्यपदार्थ उत्खनन्को ठेक्का लिएको उनको व्यवसायीक गतिबिधी लामो समय खोला दोहन गरेर त्यस क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरुलाई मन परेको थिए । खोला दोहन गर्नेहरुलाई मन नपरेकै कारण शुक्रवार खोला दोहन गरेको आरोपमा प्रहरीले मनोजलाई पक्राउ गर्यो ।
मनोज अघिल्लो आर्थिक बषर्मा मात्रै क्रसर व्यवसायमा लागेका हुन । व्यवसाय सुरु गरेकै बर्ष उनले राप्ती नदिमा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरे वापत भ्याट बाहेक ५ करोड ७९ हजार १ हजार ५ सय ८० रुपैँया राप्तीसोनारी गाँउपालिकालाई तिरेका छन । राप्तीसोनारी गाँउपालिका अन्तर्गतका नदी र नाला लामो समय देखि दोहन हुँदै आएको छ ।
मनोजलाई किन पक्राउ गर्यो प्रहरीले ?
बाँके जिल्लाको नदीजन्य पदार्थको मुख्य श्रोत नै राप्तीसोनारी गाउँपालिका र यस भित्र रहेका राप्ती नदि सहित ५ ओटा नदिहरु छन । सोही नदिहरुलाई दोहन गर्ने उदेश्यले राप्ती नदीको आसपासमा २ दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालिन छन । ति क्रसर उद्योग मध्ये कतिपय उद्योग अवैधानिक र नियम बिपरीत सञ्चालिन रहेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले स्वीकार्दै आएको छ । मापदण्ड बिना सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुलाई मापण्ड पुरा गर्न पालिकाले पटक पटक सुचना समेत जारी गदै आएको छ ।
तर, कतिपय क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित मात्रै होईन अबैधानिक रुपमै सञ्चालिन छन । अबैधानिक क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गराउनुको साटो प्रहरीले बैधानिक रुपमा व्यवसाय गर्दै आएका केसीलाई किन पक्राउ गर्यो ? हाल सम्म प्रहरीले केसीलाई फक्राउ गरेर मुद्धा चलाउनुको ठोस कारण सर्वजनिक गरेको छैन ।
लामो समय निर्माण व्यवसायीका रुपमा काम गर्दै आएको कोहलपुर ११ का निर्माण व्यावासयी नारायण लम्सालले लामो समय देखि खोला दोहन गरेकालाई नियन्त्रणमा लिनुका साटो भरखर बैधानिक व्यवसाय सुरु गरेका केसीलाई पक्राउ गर्नु अनुषन्धानको बिषय भएको बताए । मनोजले बैधानिक रुपमा राज्यलाई कर तिरेर अधिल्लो बर्ष नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको उनको भनाई छ ।
उनले नदिको अबैध दोहन नियन्त्रण गर्ने नाममा दोहन गर्नेहरुलाई नै प्रोत्साहन गर्न राज्य लागेको त छैन भन्ने आसंका व्यक्त गरे ।
हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका मनोज केसीले आफुलाई फसाउन एक समुह लागि परेको बताए । उनका अनुसार क्रसर व्यावसाय सुरु गरे लगत्तै आफुलाई व्यवसासय छोडन पटक पटक धम्की आउने गरेको नयाँ कोर्सलाई जानकारी दिए । उनले आफुले राज्यलाई कर तिरेर बैधानिक व्यवसाय गर्दै आएको बताए ।